China Carbomer1342 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Yinuoxin
Carbopol, nke a makwaara dị ka carbomer, bụ acrylic crosslinking resin crosslinked na acrylic acid site pentaerythritol na na. Ọ bụ ezigbo ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-ekwu okwu banyere ịkọwa ihe. Mgbe neutralization, Carbomer bụ ihe magburu onwe jel matriks na ndim, nkwusioru na ndị ọzọ dị mkpa ojiji. Ọ nwere usoro dị mfe na nkwụsi ike dị mma. A na-ejikarị ya eme ihe na emulsion, ude na gel.
Chemical Aha: Cross-jikọrọ Polyacrylic Acid Resin
Molekụla Structure: - [-CH2-CH-] N-COOH
Ọdịdị:ọcha uzuzu uzuzu
PH Uru: 2,5-3,5
Mmiri ọdịnaya%: ≤2.0%
Viscosity: 20000 ～ 40000 mPa.s
Carboxylic acid Afọ%: 56.0—68.0%
Arọ Dị arọ (ppm): 20ppm
Mmapụta Solvents%: ≤0.2%
Njirimara: Ọ nwere a ukwuu oru oma ndim mmetụta na ike na-emepụta kristal doro anya mmiri ma ọ bụ mmanya-mmiri jel, na ike rụọ ọrụ nke ọma iguzogide ion.
Ngwa nke Ngwa:Ọ bụ usoro nnyefe ọgwụ na-enweghị akụkụ ma nwee mmetụta polymerization-na-emulsification. Na gburugburu ebe obibi nke electrolyte, ọ bụkwa ezigbo ihe ntụgharị okwu.
Carbomer - Nyocha
Were ngwaahịa 0.1 g, tinye mmiri 20ml na 10% sodium hydroxide solution 0.4ml, nke ahụ bụ gel.
Were 0.1g nke ngwaahịa a, tinye 10ml mmiri, maa jijiji nke ọma, tinye 0.5ml thymol blue egosi ngwọta, ọ ga-abụ oroma. Were 0,1 LG nke ngwaahịa a, tinye 10 ml mmiri, ghaa ya nke ọma, tinye 0,5 ml cresol red egosi solution, ọ kwesịrị ịbụ edo edo.
Were 0.lg nke ngwaahịa a, tinye 10ml mmiri, gbanwee pH uru na 7.5 na lmol / L sodium hydroxide solution, tinye 2ml nke 10% calcium gasification solution mgbe na-akpali akpali, wee mepụta ọcha ọcha ozugbo.
Dị mpempe akwụkwọ infrared (iwu izugbe 0402) nke ngwaahịa a kwesịrị ịnwe njirimara nke ọma na 1710cm-1 ± 5cm-1, 1454cm-1 ± 5cm-1, 1414cm-1 scrrt1, 1245cm-1 ± 5cm-1, 1172cm-1 ± 5ccm-1, 1115cm-1 ± 5citt1 na 801cm-1 ± 5citt1, n’etiti 1710cm-1 nwere ike ịmịkọrọ ihe.
Zọ Mbukota: 10kg Carton
Adị ndụ:afọ atọ
Nchekwa na ationgbọ njem: Ngwaahịa a anaghị egbu egbu, na-ere ọkụ, dị ka mbupu nke kemịkalụ, kpuchie ma chekwaa ebe akọrọ.
Kwuru:ụlọ ọrụ anyị na-enyekwa ụdị ngwaahịa Carbopol dị iche iche.
Nke gara aga: Ogbogu 809